Amanqaku kaJeremy Levy malunga Martech Zone
Amanqaku ngu UJeremy Levy
Nokuba uthetha iRollercoaster Tycoon okanye iDropbox, iminikelo ye-freemium iyaqhubeka nokuba yindlela eqhelekileyo yokutsala abasebenzisi abatsha kwiimveliso zesoftware zabathengi kunye nezamashishini ngokufanayo. Nje ukuba bangene kwiqonga lasimahla, abanye abasebenzisi baya kuthi ekugqibeleni baguqukele kwizicwangciso ezihlawulelweyo, ngelixa uninzi luza kuhlala kwindawo yasimahla, umxholo onazo naziphi na izinto abanokufikelela kuzo. Uphando ngezihloko zotshintsho lwe-freemium kunye nokugcinwa kwabathengi kuninzi, kwaye iinkampani zihlala zicelwe umngeni wokuba zenze inkqubela phambili
Idatha enkulu ayisasebenzi kwishishini. Uninzi lweenkampani lucinga ngokwazo njengokuqhutywa kwedatha; iinkokheli zetekhnoloji ziseta ukuqokelelwa kwedatha, abahlalutyi bahluza idatha, kwaye abathengisi kunye nabaphathi beemveliso bazama ukufunda kwidatha. Ngaphandle kokuqokelela kunye nokulungisa idatha ngakumbi kunangaphambili, iinkampani zilahlekile ukuqonda okubalulekileyo malunga neemveliso zazo kunye nabathengi bazo kuba abazisebenzisi izixhobo ezifanelekileyo ukulandela abasebenzisi kulo lonke uhambo lwabathengi